Namerina ny sidina Maorisy i Emirates, satria misokatra ho an'ireo mpizahatany iraisam-pirenena ny nosy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Maorisy » Namerina ny sidina Maorisy i Emirates, satria misokatra ho an'ireo mpizahatany iraisam-pirenena ny nosy
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao lafo vidy • Vaovao Mafana Maorisy • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany UAE • Vaovao isan-karazany
Manomboka amin'ny 15 Jolay ka hatramin'ny 30 septambra 2021, hanokatra ny sisintaniny ho an'ireo mpandeha vita vaksiny sy teratany maorisianina i Maorisy.
Emirates dia hiasa sidina roa isan-kerinandro mankany Maurice manomboka amin'ny 15 Jolay.
Ny fiaramanidina dia hametraka ny fiaramanidina Airbus A380 mankany amin'ny toerana malaza any amin'ny Ranomasimbe Indianina manomboka amin'ny 1 Aogositra.
Ireo mpitsangatsangana vita vaksiny feno dia afaka mankafy fialan-tsasatra miala sasatra sy azo antoka.
Emirates dia nanambara fa hamerina ny serivisy mpandeha any Maurice izy amin'ity fahavaratra ity miaraka amin'ny sidina roa isan-kerinandro manomboka ny 15 Jolay, satria manokatra tsikelikely ny sisintaniny ho an'ireo mpizahatany iraisam-pirenena ilay firenena. Mba hanatanterahana ny fangatahana tsena dia nanambara ihany koa ny zotram-piaramanidina fa hametraka ny sary famantarana azy Emirates Fiaramanidina A380 mankany Maurice manomboka amin'ny 1 Aogositra. Ireo mpitsangatsangana vita vaksiny feno dia afaka mankafy fitsangatsanganana miala sasatra sy azo antoka ao amin'ny lisitr'ireo toeram-pialofana azo antoka COVID-19 manerana ny nosy.
Ny sidina Emirates mankany Maurice dia hiasa amin'ny Alakamisy sy Sabotsy. Manomboka amin'ny 15 Jolay, hatolotra ny làlana mampiasa a Boeing Fiaramanidina 777-300ER, ary manomboka amin'ny 1 Aogositra, mampiasa ny fiaramanidina Emirates A380. Ny sidina Emirates EK 701 dia handao an'i Dubai 2: 35hrs ary ho tonga any Maorisy amin'ny 9: 10ora ora eo an-toerana. Ny zotra hiverina dia hiasa ny zoma sy alahady. Ny sidina Emirates EK 704 dia handao an'i Maurice amin'ny 23: 10hrs ary tonga any Dubai amin'ny 5: 45hrs ora eo an-toerana, ny ampitson'io.
Ny traikefa Emirates A380 dia mijanona ho ankafizin'ny mpizahatany noho ny tranony malalaka sy mahazo aina ary ny zotram-pitaterana dia hanohy hanitatra ny fametrahana azy mifanaraka amin'ny fiverenan'ny fangatahana miadana. Emirates dia miasa amin'ny A380 mankany New York JFK, Los Angeles, Washington DC, Toronto, Paris, Munich, Vienna, Frankfurt, Moskoa, Amman, Kairo, ary Guangzhou.
Avy amin'ny torapasika fasika fotsy, rano madio mangarahara, ary ny endriny mahafinaritra - Mauritius dia mijanona ho iray amin'ireo toerana fialantsasatra malaza indrindra, manintona ireo mpandeha manerana an'i Amerika, Eropa ary Moyen Orient. Ny mpandeha any Emirates dia afaka mankafy ny toeran-dranomasina indianina hafa ihany koa, satria ny sidina manidina dia manolotra sidina 28 isan-kerinandro mankany Maldives ary sidina fito isan-kerinandro mankany Seychelles.
Manomboka amin'ny 15 Jolay ka hatramin'ny 30 septambra 2021, hanokatra ny sisintaniny ho an'ireo mpandeha vita vaksiny sy teratany maorisianina i Maorisy. Ireo mpitsangatsangana vita vaksiny feno dia afaka mankafy "fialantsasatry ny hotely" ary misafidy amin'ny lisitr'ireo hotely ankatoavina manerana ny nosy. Manomboka amin'ny 1 Oktobra, i Mauritius dia hanomboka handray ireo mpitsangatsangana vita vaksiny feno izay afaka mizaha malalaka ny nosy tsy misy famerana.